Sannla – Page 217 – Myanmar News
လူငယ်တွေကြား ခေတ်စားလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ခင်လှိုင်ရဲ့ သမီးချောလေး သဇင်ထူးမြင့်
December 18, 2017 CdJHfSNabKzVRyFBnz 0
လူငယ်တွေ အရမ်းအားပေးတဲ့ သရုပ်ဆောင်ခင်လှိုင်ရဲ့ သမီးချောလေးသဇင်ထူးမြင့် သရုပ်ဆောင်ခင်လှိုင်ရဲ့ သမီးချောလေး သဇင်ထူးမြင့်ကိုတော့ ပရိသတ်တွေ အားလုံးသိထားကြ မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။သဇင်ထူးမြင့်ဟာ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ လည်းစတင် လျောက်လှမ်းလာပြီဖြစ်ပြီး ပရိသတ် အားပေးမှုလည်း ရရှိနေသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သူမရဲ့ဖေဖေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ပရိသတ်တွေလည်း အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ခိုးဆိုးလုနှိုက်(၂) တောကျီးကန်း Press […]
မြန်မာလူမျိုး မြန်မာအမျိုး သမီးအတော်များများက ကိုယ်လုံး ကိုယ်ပေါက် လှကြတယ်။ ဟိုးအရင် ခေတ်ကတည်းက ခါးသေးပြီးတော့ တင်ကားတာမျိုးတွေရှိကြတယ်။ အဲဒါမျိုးကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ် တယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောကြတယ်။ နန်းမွေတို့ မျက်စိထဲမှာလည်း လှ တယ်လို့ ခံယူထားတယ်။ကိုယ်တိုင် လည်း ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ရှိတဲ့ အတွက် ရိုက်ဖြစ်တယ်။ ဖေ့စ်ဘုတ်ခ် မှာ […]
ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်နေမင်းဟာ သူရဲ့ တူဖြစ်တဲ့ အုပ်သာကျော် ကိုအနုပညာလောကထဲဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက် လက်တွဲခေါ်ဖြစ်နေပါတယ် ။ ထိုကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး “ သူ့မှာလိုအပ်နေတာက အတွေ့အကြုံ၊ မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ရုပ်ချောရုံ ၊ ငွေရှိရုံနဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ ။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့က လူထဲက လူတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်တာဖြစ်တဲ့ အခါကျတော့ ဘ၀အသက်မွေးမှုအတွေ့အကြုံ […]
ဒါတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ များနေပြီလို့ ယေဘုယျခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါဟာ ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ရောဂါတစ်ခုပါ။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရေးအကြီးဆုံး အဓိကအင်္ဂါတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ နှလုံးဟာ အသက်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက် အရေးပါပြီး အချိန်အကြာကြီး နှလုံးရပ်သွားမယ်ဆိုရင် သေဆုံးပြီလို့ သတ်မှတ်နိုင်ကြပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင် မဆင်ခြင်ရင် နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှလုံးရောဂါရှိနေကြောင်း ခန္ဓာကိုယ်က သတိပေးနေပေမယ့် […]
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ထောက်ကြန့်၊ ကုန်းတလပေါင်ကျေးရွာရှိ အဆောင်လိုင်းခန်းတစ်ခုတွင် ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီခွဲခန့်က ဇနီးဖြစ်သူနေအိမ်ပေါ်က ဆင်းသွားသဖြင့် အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး သေတမ်းစာ ရေးကာ ကြိုးဆွဲချ အဆုံးစီရင်သွားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ သေဆုံးသူ အမျိုးသား၏ […]
ဘယ်သူ့အကူအညီမှမလိုပဲ ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ..
ဘယ်သူ့အကူအညီမှမလိုပဲ ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ.. မိန်းကလေးတိုင်းဟာ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းပြီး အရာရာကို ကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့သူတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ကိုယ့်ဘဝကို အလွယ်နည်းနဲ့မဟုတ်ပဲ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာ ရုန်းကန်လာပြီးမှ ထိပ်ဆုံးကိုရောက်သွားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီလို မိန်းကလေးတွေရဲ့ အမူအကျင့်၊ လက္ခဏာရပ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တကယ်လို့သင်ဟာ အချက်တော်တော်များများနဲ့ကိုက်ညီနေခဲ့ရင် ထိပ်ဆုံးကိုရောက်လာနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်တာကြောင့် […]
နှလုံရောဂါအတွက်ပါ ဆိုးကျိုးမရှိကောင်းမွန်တဲ့ ဆေးဖက်ဝင် ခရေ
လယ်တောကအပြန် ပန်ချင်တယ်ခရေဖူးဆိုလို့ မောင်ခူးကာပေး။ မနက်တုန်းဆီက ကြော့ဆုံးကိုမောင်မြင်တော့ သူ့ဆံပင်နှင်းဆီပွင့်တွေနဲ့ ဂုဏ်တင့်တယ်လေး၊၊ ခေတ်စမ်းစာဆို ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်၏ ကဗျာလေးကို နှုတ်မှရွတ်ဆိုမိရင်း ခရေအကြောင်းကို စဉ်းစားမိသည်၊၊ ခရေပင်အောက်မှာ လျှောက်လှမ်းရင်း ကြွေကျလာသော ခရေပွင့်လေး များကို ကောက်ယူနမ်းကြူခဲ့ဘူးသည်မှာ အခါခါပင်ဖြစ်သည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကသာမန် အကြွေပန်းလေးများဟု ပင် စိတ်ဝယ်ထင်မှတ်မှားမိသည်။ တိုင်းရင်းဆေးပညာ […]
ဘ၀က​ပေးတဲ့​သင်​ခန်းစာ အချို့​ကြောင့်​ သန်​မာသွားခဲ့ကြ​သောမိန်းမများ….
ဘ၀က​ပေးတဲ့​သင်​ခန်းစာ အချို့​ကြောင့်​ သန်​မာသွားခဲ့ကြ​သောမိန်းမများ….. မိန်းမ​တွေဟာ ကြာ​လေတစ်​​ယောက်​ထဲ ရှင်​သန်​တတ်​လာကြတယ်​…. ဒါယ​နေ့​ခေါတ်​ရဲ့ ဖြစ်​ရပ်​မှန်​ပဲ …ကိုယ့်​ပတ်​၀န်းကျင်​က မိန်​က​လေးတစ်​ချို့ တစ်​​နေ့ထက်​တစ်​ချို့ ပိုပြီးထက်​မြက်​လာတယ်​.. ကိုယ်​တိုင်​ကား​မောင်းတယ်​ ၊ပိုက်​ဆံကိုရှာတယ်​အိမ်​မူ့ကိစ္စကိုနိုင်​တယ်​၊ဟင်း​ကောင်းတစ်​ခွက်​..ကောင်း​ကောင်းချက်​နိုင်​တယ်​၊အခက်​ခဲရှိရင်​.. ကိုယ့်​ဖာသာကိုယ်​ရင်​ဆိုင်​နိုင်​တယ်​၊မိန်းမ​ပျော့​လေး..က​နေမိန်းမလူစွမ်း​ကောင်း​တွေ ဖြစ်​လာကြတယ်​။​ယောက်ျားဆိုတာကို မလိုအပ်​​တော့ဘူး ဆိုတာထက်​မ​ရွေးချယ်​ချင်​​တော့သလို ဖြစ်​လာကြတယ်​။ကိုယ့်​ကိုကိုယ်​ လည်းချစ်​မြတ်​နိုးပြီး ​ပျော်​​ပျော်​​နေလည်းဒီတစ်​ရက်​ပဲလို့ ဘာကိုဘာမျှ ထိရှမူ့မခံပဲ ​နေတတ်​လာတယ်​။ဘ၀က်ိုတစ်​​ယောက်​ထည်း ​ရှေ့ဆက်​ရတယ့်​..မိန်းမသား​တွေဟာ […]
အလုပ်လည်း ကြိုးစားပါ၊ လှလည်း လှနေပါစေ
December 17, 2017 CdJHfSNabKzVRyFBnz 0
ငယ်တုန်းက မှတ်သားဖူးခဲ့တဲ့ စကားရှိပါတယ်။ `အလုပ်ပြီးမြောက်စေချင်ရင် အဲဒီအလုပ်ကို အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို လုပ်ခိုင်းလိုက်ပါ’တဲ့…။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ အလုပ်တစ်ခု၊ စီမံကိန်းတစ်ခုများ အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရင် အဲဒီအလုပ်ကို အာရုံစိုက်ပြီး ပြီးမြောက်ချိန်ထိ မနားတမ်းအလုပ်လုပ်ပေးဖို့ ဝန်မလေးကြဘူး။ အမျိုးသမီးတွေက အလုပ်ကို မရပ်မနေ အလုပ်လုပ်တတ်ကြတဲ့အတွက် ဘယ်လိုအလုပ်မျိုး ပေးပါစေ၊ […]
တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့ ဆေးဖက်ဝင် သတ္တ၀ါ အပင်
ဆေးဖက်ဝင် သတ္တ၀ါ အပင် – ရှီးပဒီး ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ ရေခဲတောင်ပေါ်မှာ ပေါက်ဖွားပြီး ဆေးဘက်ဝင် တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့ ရှီးပဒီးလို့ခေါ်ကြသော အကောင်တစ်ပိုင်း၊ နွယ်ပင်တစ်ပိုင်း အကြောင်းကို လက်လှမ်းမီသလောက် ရှာဖွေကြည့်ထားတာလေး ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ရေခဲတွေ ဖုံးလွမ်းနေတဲ့ တောင်တန်းကြီးတွေမှာ ဆေးဘက်ဝင်တဲ့ ရှားပါးသစ်ပင်များနဲ့ တိရိစ္ဆာန်များကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဆောင်းမှာ […]
« 1 … 216 217 218 … 245 »